DIGIL IYO MIRIFLE OO CAMBAAREYN PUNTLAND U JEEDIYEY | Xisbiga Xuriyada (The People Of Freedom)
DIGIL IYO MIRIFLE OO CAMBAAREYN PUNTLAND U JEEDIYEY
1. Qaraxii maanta kadhacay Baydhabo oo dad masaakiin ah waxba galabsan kuna dhinteen in kabadan 10 qof kuna dhaawacmeen in kabadan 30 meeyo una badan Haween masaakiin intii kudhimateyna Ale ha unaxriisto kuwa dhaawacmeena Ala ha caafiyo Amin.
2. Qodobkaan ayaa ah mid aad ii murjiyey qeebna ka ah dabar goynta lagu haayo DM dadkisa dalkiisa iyo damiirkisaba, Maanta markii aan dhageystey war dhahaayo Cidanka Amniga Garoowe oo soo qab qabtey dad katirsan Al-shabab kana soo jeedaan gobolada Koonfureed ee ku hadla Afka MAAY ayna qabteen iyagoo megaalada soo galaayaan Hadaba suasha waxay tahay Ikhwaanii…?
* Ma qof walbo ka yimaado Gobolada looga hadlo Afka MAAY Ma Alshabaabaa
* Maxaa udiidey in lagu eedeeyo dadka kaleed oo ku hadla Afka Maxaa ama dega Deegaanada kaleed
* Maxaa Faroole daba dhigey mar walbo dadka MAAY-ga ku hadla mar uu so Tarxiilo iyo mar uu toogto
* Markaan dhageystey warka Taliyaha Garowe, wuxuu yiri dadkaan iyagoo soo galaayaan qabaney, deeganka markaan weydiiney makala yaqanaan, waxay ka imaadeen Ufurow Gofgaduud….., waan wareysaneynaa kadibna waa toogan doonaa!!!!!
Hadaynu nahay Ragga DIGIL Iyo MIRIFLE, Puntland Wey na Taqaanaa awoodeyna Maanta, waxaana maanta PUntland ku nool ku dhowaad 100,000 oo DIGIL Iyo MIRIFLE ah; haddii aydaan ka waantoobin wax u dhimida AMA ku eedeynta DIGIL Iyo MIRIFLE oo dhan in ay yihiin ALSHABAAB, u diyaargarooba awoodeyna. Waxaad ogaataan qabiil ahaan ciidanka ugu Badan ee la socda dowlada Ethiopia Iyo kuwa ka tirsan Federaalka ay yihiin Rag DIGIL Iyo MIRIFLE ah.
War waa yaabee yaa umadaan u hadlaaya qaar ay badda Boosaso kudaadiyan iyo kuwa ay Toogtaan iyo kuwa Ay soo Tarxiilaan hantidoona dhacan, waxaan hadaba idin leeyahay arintaas halaga hadlo intey goori goor tahay fakarkiinana ka dhiibta.
Taliyaha Ciidamada Garoowe ayaa hadalkiisa ka sii daayey IDAACADA VOA maanta Ee hoos ka dhigeyso
FG. Ujeedkeygu ma ahan in aan difaacno qof denbiile ah lakin waxaa arkaayaa in ay dadkaan loo baabinaayo in aan laheyn wax udooda ama looma ooyaaan DM hurdadaan kujirnaaye hala tooso.
Deadly blast rocks south Somalia city Madaxweyne Shariif oo maahmaah uu leeyahay Nin Isaaqa -Ina Xagaadheere la doontay Reer Mudug